Nei Uchifanira Kugeza?
Imba vashanyi vanogona kukubhadhara iwe kushanya kwakareba. Iwe unogona kudzivirira dhivha kubva kuchimbuzi kuenda kuwadhiropu yako kana iwe uine jasi rakagadzirira. Bhati yekugezesa iyo yakareba zvakakwana kuti ugare wakavharwa ndiyo mhinduro kwayo kune hama isinganzwisise kuda kwako kwekuvanzika. Chengetedza imwe yekugezesa paruoko rwe h ...
Chii chinoitwa nematiresi wedziviriro?
Anodzivirira metiresi anoita zvinhu zvina: Anochengeta metiresi yakachena. Miviri yevanhu yakanaka kwazvo. Tese tinodikitira usiku. Isu tese tinogadzira mafuta kubva mumatehwe edu. Vamwe vedu vanopoda-poda. Isu tese tinodurura akafa maseru eganda. Kune zvimwe zviitiko zvinogona kuburitsa "nzvimbo nyoro" pane th ...
Chii chinonzi Pillow Mudziviriri uye Nei Uchifanira Iwe?
Kana zvasvika pakurara, vazhinji vanotarisa pamachira uye mutsago pachawo. Nekudaro, pane chakakosha chikamu chako chemubhedha muunganidzwa chinogona kuwedzera hupenyu hwepiro yako: mutsamiro wedziviriro. Piro inodzivirira zipi yakavharwa, ichipa chipingamupinyi pazvinhu zvakajairika kuitira kuti iwe ugone kusangana ...